Ngenye intsasa ephumayo ngokukhawuleza ufumanise ukuba umntwana wakho usebenza ebantwini, eqhubeka ekhula. Ulambile, kwaye kubonakala ukuba ubisi sele luncinane. Musa ukwesaba. Ixesha elizeleyo kwaye lihlala lilula ukuyicombulula. Ukubeleka kunamathuba okwehla okwehla ubisi oluveliswe.
Ngokuqhelekileyo le nkalo ibonakala kwi-3, 7, 12 iiveki zobomi bomntwana. Kwaye ngenxa yokuba i-crumb ekhulayo ayifuni isifuba, esetyenziselwa ukuvelisa ubisi kuye okwangoku. Ngokuchanekileyo ngenxa yokuba umntwana ukhula ngokukhawuleza ngeli xesha, umzimba kamama awunalo ixesha lokuzivumelanisa neemfuno zentsana ebusweni. Ukongezelela, umama ube neenguqu zesikhashana kwi-hormonal background, echaphazela nokuvelisa ubisi. Kodwa kwimodi yokutya, akukho mfuneko ukuba uyothuka. Zonke ezo zisesigxina (ngokuqhelekileyo zingekho ngaphezu kwe-2-3, zincinci iintsuku ezi-7), kwaye uya kukwazi ukujamelana nabo xa ubeka umntwana kwisifuba sakho kwisicelo sokuqala. Indlela yokujamelana neengxaki zesicwangciso esinjalo, siza kuxela kwinqaku ngesihloko esithi "Yintoni enokuyenza xa kungekho ubisi obaneleyo ebusweni".
Isixa sobisi esiveliswayo asikho ngaso sonke isizathu esifanayo ngenxa yezizathu ezahlukeneyo - umsebenzi nomoya wengane, imeko yempilo kunye neemeko zengqondo ekhaya, isimo sengqondo somama, esinempembelelo enamandla kwi-lactation. Ezinye iingcali zikholelwa ukuba ukuxhuma ekukhuleni komntwana, okwenzeka phantse kwiiveki ezintandathu, kunokuthiwa "ulambile." Futhi ukukhathala okugqithiseleyo, ukunyusa ngokweqile, ukuphulwa kokusela nokutya komama kunika umhlaba ukuphuhliswa kokunciphisa ubisi.
Oogqirha banxusa oomama kwindawo yokuqala ukuba baqwalasele ukutya kwabo kunye nokuphumla kwabo. Umama onoxanduva kufuneka nje aphumle aze adle ubuncinane amahlanu ngosuku. Ngethuba lokunciphisa ubisi, sebenzisa ngakumbi amanzi-ubuncinane ii-2.5 ilitha ngosuku. Oku kubaluleke kakhulu ekuveliseni ubisi. Thelela kwiibhotile iimali ezifunekayo zeti kunye nobisi, itiye ye-phyto ukwandisa i-lactation okanye i-compote yezithelo ezomileyo nokusela rhoqo! Musa ukucinga rhoqo ngokusilela ubisi kunye nokukhathazeka malunga nokutya, kufuneka ubenqatshelwe kwaye uphumule. Yaye ubisi luya kubonakala. Dlulisa inxalenye yemisebenzi yasendlini kwiintsapho. Ngethuba lexesha lobisi obuncinane, bhinqa umntwana wakho ezandleni zakho okanye ngendwangu, fakela i-crumb ibe yesikhumba sakho, uthethe naye, uthathe amanzi ashushu afudumele, ubeke umntwana ecaleni kwakho xa ulele. Yaye kwaye iindlela zokufihla ubisi ziya kusebenza kwikamva elikufutshane.
Khumbula - yinto engakunceda ukuba ubuyisele i-lactation. Yingakho ngexesha lobunzima umntwana ucela ibele rhoqo, ngenxa yokuba ubuninzi bobisi obuveliswayo bulawulwa. I-"imiyalelo" efana neyobisi, kwaye umzimba wam umama uphendula kwisicelo sakhe. Khumbula: i-lactation isebenza ngomgaqo "wokunikezelwa kwemfuno", xa umntwana esondeza ubisi, ngakumbi kuya kuveliswa ngeentsuku ezilandelayo. Musa ukunyusa, nangona ubisi, njengoko ucinga, akukho. Ngexa ulala phantsi kwakho, vumela umntwana anamise. Tshela omncinci ukuba kubaluleke kangakanani ukuba uzama ukukunceda unqobe ubunzima bexeshana, njengoko ufuna umzamo wakhe, ukuqonda kwakhe. Ukuqhaqhazela i-crumb on back, i-esile, intloko. Vumela iintsana zingaboni ngaso sonke isikhathi intsingiselo yangempela yento ekuthethwe ngayo, kodwa isigidimi sengqondo kunye nesiseko esisisiseko sifunde ngokuchanekileyo. Ukongeza, umnxibelelwano "isikhumba sikhuphe" ngexesha lokutya liya kunceda ukuveliswa kobisi. Abacebisi abancinci bebele ukucebisa ukutyumbela okwethutyana ukunyusa i-lactation ngexesha lokunciphisa ubisi. Sebenzisa ixesha elininzi kwindawo evulekile, yenza uhambo olude kunye nomqhubi. Kucetyiswa ukuba ungathengi ukutya, kodwa epakini. Zama kwakhona ukuhlela urhulumente wakho ngendlela efana nokwabela ixesha lokutya kwebusuku - kuba ngaphandle kokuba umzimba wakho "awuqondi" kubaluleke kangakanani ukuba ubisi luveliswe ngoku ngoku. Ngokuqhelekileyo amanyathelo anjalo anele ukubuyisela indlela yokutya yokutya kunye nokulibala ngokuncipha. Kwiimeko ezigqithiseleyo, unokwenza uvuselelo olongezelelweyo lwe-lactation.
Yintoni engafanelekanga ukwenza?
Ukunciphisa i-laktatsionnom nakweyiphi na imeko akunakwenzeka ukuncedisa, dopaivat nokuzola umntwana onentliziyo. Ungayisebenzisi ibhotile, kungakhathaliseki ukuba iqulethwe kuyo. Ukuncedisa umntwana kunye nefomula kuyamkeleka, kuphela ukususela ngomhla wesithandathu, emva kokuqala kokunciphisa ubisi. Kuze kube ngoko, kufuneka uqonde ukuba umntwana akalambile okwamanje, ufuna ukufumana ubisi oluncinane. Zama ukunciphisa uxhumano nabanye ukuze bangalondli umntwana. Khangela ukuba umntwana usesimweni esifanelekileyo xa usibeka esifubeni sakho, kunjalo na ukubamba ingono? Ngaba wayegula okanye engabandi? Ungavumi ukondla ngokwesihlomelo, ukuba ngaba ukhokelwa ngaphambili okanye ukunyanzelwa kwabathandekayo babo.
Phatha le meko ngokufanelekileyo. Akukuhle ukuba umntwana abe nomama onobuhlungu kwaye onamahloni ecaleni kwakhe. Enyanisweni akukho nto yenzekile, kwaye yonke into iya kuguqulwa ngokuqinisekileyo. Yiba nithandekayo kwinto enayo, jonganise ukwandisa umthamo kunye nomgangatho wobisi, kodwa ngokuzithoba kunye nehla elikhulu lobisi lonina ligalelo elixabisekileyo kwimpilo yeziqhekeza. Buza abacebisi bancinci kwaye baya kukunceda ukubuyisela nokulondoloza. Ngoku siyazi ukuba yintoni enokuyenza xa kungekho ubisi ngokwaneleyo.
Konke malunga nokulungiselela kwamabhinqa
Ikhalenda yeyeza elifanelekileyo laseMpuma
Imveliso ephezulu-4 eyonakalisa isikhumba sakho
Ngawaphi amagama abantu abathanda ukuva
Ziyafumaneka phi i-infathogens?
IHoroscope ye-Lion-Woman ngoMatshi 2017
Amanga: unokuphila ngaphandle kwalo okanye ukuxoka ngamanga ukuze kuzuze
Imidlalo kwimibhobho yabantwana ukusuka kwinye ukuya kwiminyaka emibini
Uqagele ukuba obani aba nyamakazi aba 10? (Iifoto ezinokugcinwa kweefayile)
Itiye ye-Ginger yokulahleka kwesisindo
I-Cocktail kunye nama-strawberries kunye ne-basil
Ukunyangwa kwamaBrutal kwezilwanyana zasekhaya
Izambatho zika-Audrey Hepburn
Umbulelo womtshato uKsenia Borodina kunye no-Kurban Omarov ziphawulwe ngecandelo lepropati
I-oli ye-castor engummangaliso: zokupheka kwiindawo eziphambili ze-castor zeenwele